Izindaba - Ingabe Ibhokisi Lokuhlanza Lokuzihlanza Lisebenza Ngempela?
Yingxenye encane oyithandayo yokukhulisa ikati: ukuhlanza ibhokisi lodoti wekati. Kuze kwenzeke lokho, ukuvela kwamabhokisi kadoti wokuzihlanza wamakati kudala inketho yokuba nebhokisi likadoti uqobo lizihlanze ngemuva kwekati lakho.
Kodwa ingabe la mabhokisi okulahla udoti wokuzihlanza wamakati angaphansi komsebenzi? Ngezitayela eziningi nemiklamo nezinguqulo ezibuyekezwa njalo, kunezinketho eziningi ongakhetha kuzo ukuthola umdlalo ofanele wena nekati lakho.
Ibhokisi lethu le-E Automatic Cat Litter likuvumela ukuthi ucabange ngaphandle kwebhokisi lendabuko lodoti ukunquma ukuthi ibhokisi lodoti elizenzakalelayo lifanelekile yini.
Izisekelo Zebhokisi Lokungcola Lokuzihlanza
Ngebhokisi lokungcola lokuzihlanza, igumbi lokulahla liyahluza, ama-rakes, ama-flushes noma ngenye indlela aqoqa imfucumfucu ye-feline, ekuvumela ukuthintana okuncane nomchamo wekati kanye nendle futhi uqede isidingo sokuqoqa ithileyi lodoti nsuku zonke. Iningi lamabhokisi kadoti othomathikhi athola lapho ikati lakho selikusebenzisile futhi lizohlanza ukuze ngokuzayo lapho lihamba, libe nodoti omusha, ohlanzekile wekati.
Cishe abazali bekati bathi umqondo webhokisi lodoti ozihlanzayo muhle kakhulu, ngoba akekho othanda ukuhlanza amabhokisi kadoti. Kuhambisana nokuba nekati, okufana nokuhamba nenja noma ukuhlanza ikheji le-ferret.
Ukuze senze amakati ethu angaguquguquki ekusebenziseni ibhokisi, sidinga ukulihlanza nsuku zonke — ngisho nangezikhathi eziningi ngosuku — umsebenzi oyinselele onezinsuku ezinde zokusebenza kanye nokuningi okumele kwenziwe ekhaya. Uma ibhokisi linganakwa kweminye imindeni ematasa, lokho kungadala izingqinamba zokuqedwa ezingafanele. Kepha ibhokisi lodoti elizenzakalelayo lingasiza ekunciphiseni leyo nkinga.
Kodwa-ke, uma amagama athi "othomathikhi ibhokisi lodoti" enza isithombe somqondo sendawo engasebenzi, susa leso sithombe! Ibhokisi lodoti elizenzakalelayo lisasho umsebenzi othile, yize lizohluka kunqubo yakho yamanje yamabhokisi kadoti. Amabhokisi odoti azenzakalelayo azodinga ukuthi ukhiphe ithileyi noma igumbi eligcina imfucumfucu yekati elihlungiwe futhi lithathe indawo noma ligcwalise udoti wekati ukuze ibhokisi lisebenze.